Guddoomiyahii Baarlamaanka Puntland Oo Xilka Laga Qaaday – Goobjoog News
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, ayaa waxay sheegayaan in xildhibaannada baarlamaanka ee dowlad goboleedka Puntland xilka ka qaadeen guddoomiyahoodii, C/xakiin Dhoobo Daareed, kadib mooshin ay ka keeneen.
53 Mudane ayaa soo xaadirtay kulanka maanta, waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee baarlamaanka Puntland.
49 Mudane ayaa u codeeyey in xafiiska uu baneeyo guddoomiye Dhoobo Daareed, halka 4 xildhibaan ay ka aamuseen.
Mudanayaasha baarlamaanka Puntland qaarkood ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha ay xilka ka qaadeen in uu sameeyey xad-gudub dhanka Dastuurka ah, islamarkaana xarunta baarlamaanka uu soo geliyey ciidamo beeleed waa sida ay hadalka u dhigeene.
Dagaal ay ku dhinteen Saddex qof ayaa xalay ka dhacay xarunta baarlamaanka Puntland, kaasi oo u dhaxeeyey ciidamo Booliis ah oo uu hoggaaminayey taliyaha Booliiska Puntlan iyo sidoo kale ciidan la sheegay in xaruntaasi uu geeyey guddoomiyaha baarlamaanka Puntland.
Dhoobo Daareed "Waa Xaaraan Xil Ka Qaadisteyda"